मेरो सम्पूर्ण जीवन पारदर्शी छ, फैसला जनताको हातमा: शाह - Dainik Nepal
मेरो सम्पूर्ण जीवन पारदर्शी छ, फैसला जनताको हातमा: शाह
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर १८ गते ७:३८
वामगठवन्धनबाट प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ कैलालीका उम्मेदवार मदनकुमारी शाह (गरीमा) नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । दिल्ली विश्व विद्यालयबाट स्नात्तकोत्तर शाह २०४६ सालदेखि पार्टी सदस्यका रुपमा रही काम गर्नु भएको छ ।२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाटै एमालेका उम्मेदवार भएकी शाह माओवादी उम्मेदवारसंग पराजित हुनभएको थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी एमाले नेतृ यसपटक वाम गठवन्धनबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ । जसले आफ्नो केही त्याग गर्न सक्दैन उसले अरुको लागि केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रेरणा बुवाबाट पाएकी शाह आफ्नै जीवनमा भोगेका दुःख र संघर्षहरुबाट प्राप्त सिकाइहरु र सम्पूर्ण जीवन राजनीति र जनसेवामा लगाउने प्रण लिएको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहासंग निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी ।
अहिले राजनीतिप्रति वितृष्णा छ मतदाताको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुभयो ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । जहा गयौ मानिसले विहान ८ बजे समय दिनु भएको छ । साझको ९ बजे पनि समय दिनु भएको छ यस्ता् चिसोमा आगनमा बसेर समय दिनु भएको छ । हाम्रा कुरा सुनिरहनु भएको छ । उहाहरुको एउटा गुनासो छ हामी जिताएर पठाउछौ तर हामीले चाहेको विकास पाएनौ ।
मतदाताको मनोभावना कस्तो पाउनु भयो ?
मैले अघि भनेजस्तै विकास भएन । बाटो पुल शिक्षक संख्या नभएका गुनासा छन र उनीहरुलाई यस्तै चाहिएको छ । यस पाली मतदाताले विकास चाहेका छन । २०६४ को चुनाव माओवादीमय थियो, २०७० मा मधेशवादी दलका नेता विजयी भएर चर्चा पायो । दुई वर्ष यता टीकापुर घटनाले चर्चामा छ ।
यसका अवशेषहरु अझै बाकी छन् कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
पहिलेको भन्दा अहिले जनताको बुझाईमा धेरै परिवर्तन आएको छ । हिजो समाजमा सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्नुपर्छ भनिरहदा त्यति कुरा सुन्दैनथे यसपाली हामी बुझाइ रहेका छौ उनीहरु भनिरहेका छन् यो अलि गलत रहेछ कि । आखिर हामीलाई चाहिएको सुख संमृद्धि विकास नै हो भन्ने बुझाई छ सोचमा परिवर्तन आएको छ ।
यो स्वतः कि राजनीतिक माहोलले परिवर्तन आयो ?
घटनाक्रमलाई विष्लेषण गरिरहनु भएको छ । हामी सामुदायिक, साम्प्रदायिक कुरा गर्नू हुदैन भनेर बुझाइरहेका छौं । मैले भेटेका मतदाताले भनिरहेका छन् । हामीले बुझिसहेका छौं । के बुझ्नुभयो भन्दा हिजो पहिले ढकियामा मत हाल भन्ने त्यही मानिस पछि नमस्तेमा हाल भने त्यही मानिसहरु अहिले कोही रुखमा भन्छन कोही केमा ।आखिर उनीहरुले आफ्ना लागि रहेछन ? हाम्रा लागि रहेनछ भन्ने थाहा पाइ सकेका छन् । समाजमा जुन प्रकारको विभेद छ, आर्थिक विभेद छ, समाजिक विभेदको पीडामा छन् । म यो समुदायको भएका कारणले गर्दा पछाडि परेको छु हेपिएको छु भन्ने छ त्यसलाई माथि उठाउनु छ । तर जातीको नारा दिएर, समुदायको नारा दिएर राजनीतिक गरिरहेका व्यक्ति र प्रवृति प्रति वितृष्णा छ । अब हामीले यसरी हुदैन पार्टीको विचारलाई पनि हेर्नुपछै । सही कुरा गर्ने व्यक्तिलाई पनि हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेका छन् ।
टीकापुरमा दलका नेता स्थापित नहुनु तर अप्रत्याशित नतिजा आउनुको परिणाम केलाउनु भएको छ ?
यहालाई अनुरोध गरौ २०६४ देखि २०७० सम्म समुदाय असाध्यै धु्रविकृत थियो । त्यतिबेला राजनीतिक एजेण्डा उठाएका दलले गलत आकांक्षा जगाइदिएका थिए ।
सोझासाझा जनतालाई राजा बनाउछु प्रधानमन्त्री बनाउछु के के गर्छु भन्दा स्वभाविक थियो । हामी संविधान निर्माणको क्रममा थियौ । सबैले आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न चाहेका थिए । म त्यसलाई अन्यथा मान्दैन । अब बुझ्दै जाऊ, २०६४, २०७०, २०७४ को निर्वाचन परिणाम हेरौ परिवर्तन भैरहेको छ । अब त्यस्तो अवस्था आउदैन जस्तो लाग्छ ।
चुनावमा जातीय, क्षेत्रीय नाराले मतदातामा धु्रवीकरण ल्याउछ । यस क्षेत्रमा जात, भेगका आधारमा मत खस्ने संभावना कति छ ?
हाम्रो नेपाली समाजको राजनीतिक र सामाजिक चेतना तुलनात्मक रुपमा पछाडि नै छ । यसले आफ्नो भनिएकाले गल्ती गर्दा पनि माफि दिने चलन हुन्छ । त्यसको प्रभाव अवश्य पर्छ । केही राजनीतिक दल र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले यही चेतनालाई बुझेका छन् र ती मानिसले अरुको आडमा त्यो मनोविज्ञानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अथक प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर हामी विचार सिद्धान्तबाट दिक्षित भएकाहरुले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । निरन्तर लागि रहेका छौं । हामी जात र क्षेत्रका आधारमा होइन पछि परेको वर्ग उत्थान र समृद्धिका लागि गठवन्धन बनाएर चुनाव लडिरहेका छौं ।
मतदातालाई के भनिरहनु भएको छ ?
कतिपय ठाउमा घरदैलो गर्यौ । अब विकास चाहिन्छ । विकास ठूला राजनीतिक दलले मात्र ल्याउन सक्छन् । यति ठूलाठूला दल एमाले माओवादी केन्द्र त अब विकासका लागि आर्थिक संमृद्धिका लागि मिल्नुपर्छ विकल्प छैन भनेर मिलिरहेका छन् । एमाले माओवादी त कमजोर शक्ति होइनन नि । भनेपछि ससाना जातीय कुरा गरेर कोही कतै आउन सक्छ तर के गर्न सक्छ ? आर्थिक विकास गर्न सक्छ ? हामीले चाहेको विकास हामीलाई दिन सक्छ ? हामीले चाहेको सुख हामीलाई दिन सक्छ ? यो विभिधतायुक्त समाजलाई जोडेर राख्न सक्छ ? सक्क्तैन । त्यसकारणले गर्दा अब कमजोर शक्तिले समाजको, देशको आर्थिक विकास गर्न सक्त्तैmनन् । आर्थिक विकास नहुन भनेको त्यो त्यो समुदायको विकासपनि नहुनू हो नि ।
टोल भेलामा मैले भनेको छु यदि तपाईलाई कुनै कुराको शंका छ मलाई प्रश्न छ भने मलाई फेसबुक, सन्देशमा पठाउनुस भनेकी छु मलाई सोधी पनि रहेका छन् । म त्यसबाट पनि प्रष्ट्याउने प्रयास गरिरहेकी छु ।
तपाई सांसद हुनुभयो त्यो बेला यस क्षेत्रका लागि के गर्नुभयो ?
सबभन्दा पहिले महिलामैत्री युवामैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आंपांगमैत्री संविधान बनाउछु, जनपक्षीय संविधान बनाउछु भन्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौ त्यो प्रक्रियामा संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएर काम गरे । यहाको जनप्रतिनिधिको नाताले मैले यहाका नागरिकलाई संझेर त्यो काम पूरा गरेकी छु । मेरो भूमिका थाहा पाएरै होला तपाईले के काम गर्नुभयो भनेर अहिले मलाई कसैले सोधेका पनि छैनन । आज सोध्नु भयो र भन्ने अवसर पाए ।
मैले के गरे भन्दा नेपालकै आर्थिक विकास, छोटो समयमा कम लगानीमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दा हामीसंग जे छ त्यही कुरालाई उपयोग गर्ने हो । हामीसंग अपार सौन्दर्यता, धरोहर छ । पर्यटनबाट संभव छ भनेर यसको प्रचारप्रसार र पूर्वाधारका लागि बजेट ल्याउन सकेकी छु । सबैले अनुभूत हुने गरी अग्रणी भूमिका गरेकी छु ।
टीकापुर पार्कका भवनलाई संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न पहल गरे सबै कन्भिन्स भएका छन् । पार्कमा भ्यू टावर बनाउन बजेट छुट्याए । बजेट काम गर्न नसकी फ्रिज भएको छ । ड्रइङ्ग, डिजाइन भैसकेकाले अब बन्छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट पटकपटक उपसचिवहरु ल्याएर भ्रमण गराएकी छु । डल्फिन क्षेत्रमा अवलोकनकर्तालाई बस्ने वातावरण भएको छु । कैलालीको पदमप्रकाशेश्वर महादेव मन्दिर पुरातत्व विभागमा दर्ज छ भन्ने कमैलाई थाहा थियो । मैले व्यापक बनाउन सके । विभागका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई ल्याएर अवलोकन गराए । म सांसद भएपछि कुनै वर्ष खाली नराखी हरेक वर्ष बजेट राखेकी छु ।त्यहा“का जनता भन्लान । हरेक युवालाई स्वस्थ, अनुशासित राष्टप्रति वफादार बनाउन खेलकूदमा बजेट हालेर धेरै खेलमैदान बनेका छन् । टीकापुरमा स्पोर्टस एकेडेमी बनाउने मेरो सपना छ त्यसको गुरुयोजना बनिसकेको छ । त्यो हाम्रो हातमा छ । सबै जातजातिको सभ्यता झल्काउने संग्राहलय निर्माणधिन छ । सामाजिक सेवामा एम्वुलेन्स दिने । महिलालाई आयआर्जन तालिम, दलित समुदायलाई राजनीतिक सामाजिक हिसावले अघि ल्याउन बजेट विनियोजन गरे ।
यी त दूरगामी महत्वका भए । तपाईको दलबाट र तपाईबाट यस क्षेत्रमा भएका काम देखाउनु पर्यो ?
नेकपा एमाले सामाजिक दायित्व सरकारले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको सयुक्त सरकारले वृद्ध भत्ता बढायौं । यद्यपी त्यसको शूरुवात एमालले २०५१ सालमा सय रुपैयाबाट गरेको हो ओली सरकारले हजारबाट दोब्बर बनायो । आर्थिक रुपले विपन्न दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, किडनी, मुटु जस्ता गम्भिर रोगका लागि निशुल्कको योजना । मुक्त कमैंया समस्या एक वर्षमा समाधान गर्न बजेट छुट्टयायो तर सरकार ढल्यो काम गर्न दिइएन एक रुपैया खर्च भएन । मुक्त कम्लहरीको उच्च शिक्षा पूरै निशुल्क बनाउने संसदले निर्णय गरेको हो त्यो लागू भएन । सुकुम्वासी समस्या समाधानको काम पनि एक इञ्च अघि बढेन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना संचालनमा ल्याएका छौं ।
कुरा लामो भो यस क्षेत्रको विकासको लागि तपाईको पार्टीको योगदान के छ भनेर जान्न चाहेको हु ?
म स्मरण गराउन चाहान्छु । यस क्षेत्रका जनताको वर्षैदेखिको माग रानी जमरा कुलरिया एमाले नेता माधवकमाुर नेपाल प्रधानमन्त्री हुदा शुरु भएको हो । ठूला बजेट पार्न राष्टिय योजना आयोगमा सुदूरपश्चिबाटै पहिलो पटक हाम्रो पार्टीले पे्रम कुवरलाई सदस्य बनाएपछि यो संभव भएको हो । यसको निरन्तरता माओवादी सरकार हुदा जनकराज शाह पनि सदस्य भएपछि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा अहिले काम हुदैछ । टीकापुर पोलिटेक्नीक, सेती लोकमार्ग यसैबेला शुरु भएका हुन । मैले २०६४ को उम्म्ेदवार बन्दा मैले चुनाव जिते पनि हारे पनि कर्णालीमा तटवन्ध गर्छू भनेकी थिए । यहा“ बाढी कटान डुवानको समस्या थियो । यहालाई कति स्मरण छ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै जनताको तटवन्ध शुरु भएको थियो पछि रानीजमरा कुलरिया योजना परेपछि त्यसैले गरिरहेको छ । यसमार्फत कति धेरै कृषि सडक, आयोजनाहरु चलिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय हामीले यो क्षेत्रको विकासका लागि ६ नम्बर प्रदेशसंग जोडनुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठाएकी छु । यसको नतिजा कर्णाली कुइनेमा पक्की पुल बन्दैछ यसको सोझो प्रभाव टीकापुरमा पर्छ । त्यो भयो भने यो व्यापारिक नाका स्वतः हुन्छ । म सांसद हुदा यो क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि मन्त्रालयका दुईदुई वटा उपसचिव, चिसापानी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष सहित टीकापुर राजका“डा यात्रा गराएकी छु ।
चुनावको मुखमा आइरहदा टीकापुरलाई केन्द्र बनाउन खक्रौला कि धनगढी नाकाका विषयमा विवाद छ । पहाडी जिल्लाको सभावनाको ढोका सेती लोकमार्गका बारेमा तपाईको पहल के रहन्छ ?
भन्सारको सन्दर्भमा खक्रौला भन्सारको निरनतर स्तरोन्नति हाम्रो शर्त हो । त्यसमा लागिरहेका छौ म चुनाव जित्दा वा नजित्दा पनि त्यसमा लागि रहन्छु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रुपमाको भारत भ्रमणमा जादा खक्रौला दुई देशको वार्ताको विषय थियो । । दुखका साथ भन्नुपर्छ कागे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडो आदेश दिएर त्यसलाई हटाउन लगाउनु भयो यो सबैलाई थाहै छ । यसले गर्दा हामीलाई पछाडि पारिरहेको छ ।
अहीले धनगढी बनाउने कि खक्रौला बनाउने भन्नेमा तानातान त भैहाल्छ । तर यदि साच्चै विकास गर्ने हो सात नम्बर प्रदेशलाई अरु प्रदेशसंग पनि जोडने हो भने खक्रौलालाई पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । चुनावको मुखमा आरोप लगाएजस्तो होला हाम्रो पार्टीको सरकार भएको बेला सेती लोकमार्ग मध्यपहाडीलाई तीव्रता दिनका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुर्भाग्य, छुट्याएको रकमको कार्यान्वन गरे त्यसको जस त एमालेलाई, माओवादी केन्द्रलाई जान्छ भनेर पछि बनेको सरकारले कुनै कार्यान्वयन गरेन । छुट्याएको बजेट पनि खर्च गरेन । हाम्रा प्रयत्न, प्राथमिकता उही हुन । यसलाई पूरा गर्ने हो । उत्तरको नाका नखोलेसम्म यो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुन सक्तैन । शक्ति सन्तुलन र यो क्षेत्रको व्यापारिक नाका, केन्द्र बनाउन यो नाका खोल्नुपर्छ । यसका लागि धेरै बोल्ने दल एमाले माओवादी केन्द्र हो । यसका लागि सबैभन्दा बढी आवाज उठाउनै म नै हो । अरुले पनि उठाएका छन् ।
तपाईको निर्वाचन क्षेत्रका योजना के छन ? जसले यस क्षेत्रमा संमृद्धि ल्याउन सकोस जनता सुखी हुन सकून ?
अघि भनेजस्तै खक्रौला भन्सारको स्तरोन्नति गर्न अतिआवश्यक छ । त्यो गर्छौ । खक्रौला टीकापुर लम्की रोड कम्तिमा चार लेनको हुन जरुरी छ । खक्रौला‐टीकापुर‐लम्की‐चिसापानी‐कुइने सडक विस्तार गर्ने त्यसलाई कर्णाली राजार्गमा जोडने मेरो इच्छा छ । यसलाइ व्यापारिक केन्द्र बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन बर्दिया र राजापुर क्षेत्रलाई टीकापुरसंग जोडन पर्छ । त्यसका लागि कर्णाली नदीमा सनकट्टी र दौलतपुरघाटमा पुल र त्यहासम्मका बाटा पक्की बनाउन जरुरी छ यो मेरो सपना हो । यस क्षेत्रमा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको पथरैया र काडा नदी हुन । यसले जोशीपुर गाउपालिका, भजनी ६ र ८ का केही ठाउ र टीकापुरका ६ र ९ वडा असाध्यै प्रभावित गरेका छन् । यहाका जनता यसबाट अत्यन्तै दुखी छन् । यो मेरो लागि चुनौतिको विषय बन्ने छ । यहाको नदी कटान भएका ठाउमा तटवन्धन र यहा पुल नहुदा डुंगाबाट आवातजावत गर्ने ठाउमा पक्की पुल आवश्यक छन् । यसका अतिरिक्त यस देशलाई यस ठाउलाई आर्थिक संमृद्धिको बाटोमा लैजान सबै सडकको स्तरोन्नति र मूल सडक पक्की बनाउनु पर्छ यो नगरी हामीले अरु काम गर्न सकिदैन । सेवा सुविधा बढाउन टीकापुर अस्पतालमा आइसीयू लगायतका सेवा र आसपासका स्वास्थ्य केन्दमा सेवा बढाउनु छ । थारु जातीमा देखिएको सिकलसेलको जाच उपचार सेवा तुरुन्तै चाहिन्छ । कृषि क्याम्पस, टीकापुर पोलिटेक्निकलाई जुन सपनाका साथ स्थापना गरेका थियौ त्यही अनुसार एकेडेमिक रुपमा स्नातकोत्तर सम्मको पढाइ गराउनु पर्छ । ७ नम्बर प्रदेशकै पर्यटन गुरुयोजना, टीकापुर पार्कमा भ्यू टावर बनेको देख्ने चाहाना छ । सूचना केन्द्र निर्माणाधिन छ त्यसलाई पूरा गर्ने ।अधुरा काम पूरा गर्ने कामलाई शुरु गरी ५ वर्षमा पूरा गर्नेछु । टीकापुरमा समस्याका रुपमा रहेको ढल निकासलाई नगरपालिकासंगको सहकार्यमा पूरा गर्नेछु । अर्को मैले देखेको नेपालको समस्या हो युवालाई कसरी रोगजार दिने यो चुनौति छ । यदी रोजगारी बढाउने हो भने कृषिको औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकीकरण गरेर स्वरोजगार बनाउनुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रमा यो संभव छ । राज्यका तर्फबाट अनुदान दिने, मुल्य तोक्ने, भण्डारको व्यवस्था, चिसयान केन्द्र बनाउने काम मैले गर्नेछु । मैले धेरै विद्यालयमा गएर देखे विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै, शिक्षक दरबन्दी छैन । निजी क्षेत्रबाट तलव खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । जसकारण शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ यसलाई समाधान गर्नेछु ।
मुक्त कमैंया र सुकुम्वासीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु पन तपाईकै क्षेत्रको समस्या यथावतै छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
मेरै र मेरै पार्टीको योजना एक वर्षमा मुक्त कमैंया समाधान गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेकै हो । सरकार ढलेर त्यो हामीले पूरा गर्न सकेनौं । अब सरकार भएको एक वर्षमा पूरा गर्छौ । यसमा ढुक्क हुनुस । यसका अतिरिक्त मुक्त कमैया वस्तीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने सपना छ, स्थानीय सरकारसंग मिलेर यो काम हामी गर्छौ । सुकुम्वासी समस्या पनि छ स भजनी वडा नम्बर ८ मा २०१७ सालदेखि बसेको व्यक्तिले लालपूर्जा पाएको छैन । मैले यस्तो पाए । अब वाम गठवन्धनको सरकार बन्छ । यो सरकार बनेपछि सबभन्दा पहिले यो समस्या समाधान गर्नेर्छौ ।
अरु दलका भन्दा फरक एजेण्डा के छन् ?
अरु दलले के गरे हेर्नुस । आफ्नै घरको अगाडिको खाल्डो नपूर्नेले नाका खोल्ने कुरा पनि गरेको सुन्छौ । सुन्दा साना पनि तर महत्वाकाक्षी योजना छ् मेरा । सगरमाथा चढ्नु छ भने मन बनाउनु पर्यो । तयारी गर्नुपर्यो त्यसतर्फका पाइला चालनु पर्यो म त्यही योजनामा छु ।यी जनताका लागि महत्वपूर्ण छन् । आधारभूत कुरा पनि हुन । त्यसैले यी पूरा हुन्छन् ।
आफ्नो गठवन्धनलाई कस्तो अवस्थामा पाउनु भएको छ ?
मनोवैज्ञानिक रुपमा निर्वाचन जितेको अवस्था हो । प्राविधिक रुपमा जितमा परिणत गर्नका लागि अथक मिहिनेत गरिरहेका छौ । यस क्षेत्रमा वामगठवन्धन जित्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तपाई नेकपा (एमाले) जस्तो ठूलो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, तपाईको विचारमा वाम गठवन्धनको औचत्य सावित हुन्छ होला ?
हुन्छ भनेर नै गरेको हो, भैसक्यो । यो जनताले विशाल हृदयका साथ स्वीकारेको अवस्था हो । जनता खुशी छ । यो निर्वाचनले हाम्रो पार्र्टी एकताको लक्ष्यलाई नजिक ल्याएको छ ।
नेपालका कम्यूनिष्ट पार्टीहरुमा टुटफूट छ । दलभित्रै गुटवन्दी छ । यो गठवन्धन र एकताको कुरा कागे्रस तर्साउने हौवा मात्र कि पूरा हुन्छ ?
नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा विचार नमिल्दा विभाजन भएको मिल्दा एकता भएको देखिन्छ । एउटा दलभित्र राजनीतिक विचारमा अन्तरसंघर्ष हुन्छ । कार्यनीति, रणनीति मिल्दा एकता र नमिल्दा विभाजन हुन्छ नै । अहिलेको आवश्कयकता राष्ट्रको आवश्यकता मिल्नुपर्छ भन्ने हो । यसैमा मनन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र गठवन्धन बनाउन पुगेको छौं । यो कसैलाई तर्साउन होइन । रहर पनि होइन वाध्यता पनि होइन । गठवन्धन राष्ट्रको आवश्कता हो ।राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन चाहान्छु । प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई जनताले उपभोग गर्न पाउन भन्ने चाहान्छौ. । त्यो वाम प्रगतिशिल शक्ति नमिलेर संभव छैन ।
तपाईका विपक्षीका कुरा सुन्नु भएको होला । गठवन्धनले जिते अधिनायकवाद आउछ भन्छन नि ?
यो विचारको दरिद्रता हो । वामगठवन्धनबाट अत्तालिएर आएको अभिव्यक्ति हो । यो सुनेर वौद्धिक तप्का हसिरहेको छ । जुन संविधान र गणतन्त्र ल्याउन ७० वर्ष संघर्ष गर्यौ । हजारौ नेपालीका छोराछोरीको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । संविधान हामीले बनाएको हो । यसमा विश्वका अनुभव लिएका छौं । हामी यसप्रति प्रतिवद्ध छौं । यसको पालना हामीले नै गर्ने हो ।
लोकतन्त्रको कुरा त उहा“हरुले हामीलाई नसिकाउदा हुन्छ । किनकी पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र त कागे्रसले हामीबाट सिकेको हो । उसको पार्टीका केन्द्रीय सभापतिले कति जना मनोनित गरेर राख्नुहुन्थ्यो ? आफ्नै पार्टीभित्र लोकतन्त्र नदिनेले लोकतन्त्रका कुरा गरेर देशलाई लोकतन्त्र दिने कुरा कसरी विश्वास गर्नु ? यो हास्यासपद कुरा हो ।
तपाई के कारणले अरु उम्मेदवार भन्दा फरक हुनुहुन्छ ?
मैले हिजो पनि संविधान सभामा काम गरे । मैले एमालेका तर्फबाट भएपनि निर्वाचित भएर काम गर्दा सबैको जनप्रतिनिधि भएर काम गरे । त्यो अनुभूति मैले गराएकी छु जस्तो लाग्छ । त्यो मेरो आधार हो । अर्को कुरा आज दिउसो घाम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा विहानै थाहा हुन्छ यसले विकास गर्न सक्छु कि सक्तैन विकास पे्रमी हो कि होइन भन्ने मेरो विगत हेर्नुस त्यो विहानी हो, अब प्रत्येक्ष रुपमा निर्वाचित भएर गए भने घामको रुपमा काम गर्नेछु ।
सात नम्बर प्रदेशको आवाज सिंहदरवारमा राख्न सक्छु भने यहाका जनतालाई विश्वास छ । यो मैले हिजै प्रमाणित गरिसके । मेरो जीवन खुला किताब जस्तै छ पारदर्र्शी छ । म कहिल्यै पनि भ्रष्टचारको पक्षमा छैन । भ्रष्टाचारलाई मैले प्रोत्साहन न कानून बनाउने ठाउमा न व्यवहारमा । मैले राजनीतिमा लाग्दा निजी जीवनलाई साइडमा राखेर लागेकी छु । असल राजनीति र जनताको सेवा मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय छन् । यिनै आधार हुन । मलाई अरु उम्मेदवासंग तुलना पनि गर्नुस । अरु उम्मेदवालाई पनि किन भनेट हाल्ने एकपटक सोच्नुस । म कुनै जोशमा होइन यहाका नागरिकको सेवा कै लागि अगाडि आएकी छु ।
अन्तमा, मतदातालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
यस क्षेत्रका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीवहिनी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामीले संविधानमा राजनीतिक अधिकार त दियौ तिनलाई उपभोग गर्नका लागि कानून बनाउन बा“की छ । ती कानून बनाउने ठाउमा पु¥याउनु भयो भने महिला, दलित, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक, विकास मैत्री कानून बनाउन क्रियाशील भएर लाग्नेछु । र यो क्षेत्रको साझा जनप्रतिनिधि बन्नेछु । निर्वाचित भैसकेपछि म पार्टीको मात्र होइन सबै जना, मलाई मत नदिएका जनताको पनि प्रतिनिधि बन्ने प्रयास गर्नेछु । सामाजिक सद्भाव सामाजिक एकता बलियो बनाएर राष्ट्र बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्नेछु । मैले समाजिक सास्कृतिक रुपान्तरण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नेछु यसका लागि हामी वामगठवन्धनका साझा उम्मेदवारहरु प्रतिनिधिसभामा म गरिमा शाहको चुनाव चिन्ह सूर्य, प्रदेश सभा क मा लालबीर चौधरीको चुनाव चिन्ह सूर्य र प्रदेश सभा ख का उम्मेदवार नेपबहादुर चौधरी सिंहराजको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हसिया हथौडामा मतदान गरी वाम गठवन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराई आर्थिक संमृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको अभियान पूरा गर्न हामीलाई अवसर दिन अनुरोध गर्दछु ।
प्रस्तुतिः एकिन्द्र तिमिल्सिना
कारबाहीमा परेका दीर्घ सोडारीले दिए घत लाग्ने प्रतिक्रिया